မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > ယေရှု၌ကြွင်းသောအရာ
မင်းအလုပ်ပြီးသွားရင်အနားယူချင်တယ်။ သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ချိုသောပျင်းရိပျော့ပျောင်းမှုဖြင့်သက်တောင့်သက်သာသက်သာစွာသက်ပြင်း ချ၍ ခွန်အားအသစ်များကိုစုဆောင်းမိစေသည်။ အခြားသူများသည်အားကစားနှင့်သဘာဝတွင်အပန်းဖြေမှုကိုရှာကြသည်သို့မဟုတ်တေးသီချင်းသို့မဟုတ်ဖတ်ရန်လှုံ့ဆော်သည့်ပုံစံဖြင့်သူတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာခံစားကြသည်။
ဒါပေမယ့်“ အေးဆေးတည်ငြိမ်” လို့ပြောတာကလုံးဝကွဲပြားတဲ့ဘဝရဲ့အရည်အသွေးကိုဆိုလိုတာ။ ငါက "ယေရှု၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေ" အဖြစ်စကားပြေချင်ပါတယ်။ ဤအရာကိုဆိုလိုသည်မှာအလွန်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းသည့်အတွင်းစိတ်အေးဆေးမှုကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖွင့ ်၍ လက်ခံလျှင်ဘုရားသခင်ကဤအလုံးစုံသောအနားယူရာနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအဆင်သင့်ရှိသည်။ good ၀ ံဂေလိတရား၏သတင်းကောင်းသည်သင်၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုယေရှုမှတစ်ဆင့်အမွေခံရရန်နှင့်သူ၏အနားယူရာ၌ထာဝရအသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ယေရှုအနားယူဖို့ဖြစ်တယ်။
ဤအရာကိုနားလည်ရန်သင်သည်နှလုံး၏ပွင့်လင်းသောနားရွက်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းအတွက်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုသိုမှီးထားလို့ပါ။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားခံစားနိုင်ဖို့ကျွန်မရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။
An dieser Stelle denke ich an die Begegnung zwischen Nikodemus, einem der Oberen der Juden und Jesus. Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus und sagte: «Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete: Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen». Die ganze Begebenheit finden Sie zum besseren Verständnis in Johannes 3,1-15 ။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုနိကောဒင်နှင့်ယခုသင်တွေ့မြင်ရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လိုအပ်သည်။ သင်တို့ပတ်လည်၌လှည့်လည်။ သင်မြင်ရသောလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့တိုက်ခတ်။ ၊ ဤဆိုးကျိုးများကသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေသောဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည်သင့်အားဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌ယေရှုနှင့်ပေါင်းစည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာကျွန်ုပ်ဤသို့ဆိုထားသည် - ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ဖြင့်ပြည့်ဝ။ သယ်ဆောင်လိုပါကကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုဖွင့ ်၍ ဘုရားသခင်အားသူ၏ဖော်ပြမှုပုံစံအားလုံးတွင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်အသင့်ရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှလုံးသားထဲမှကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲသူ့ကို“ ဟုတ်တယ်” ဟုပြောရမည်။
မကြာမီသင်သည် Advent နှင့် Christmas ရာသီကိုရင်ဆိုင်ရတော့မည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်ယေရှုသည်လူသားဖြစ်လာသည်ကိုသူတို့သတိရကြသည်။ ကျနော်တို့သူနှင့်အတူတ ဦး တည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာ၊ ဘဝ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် (သို့) အခြားသူတစ်ယောက်မှ ဖန်တီး၍ မရပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏အံ့ဖွယ်အမှုနှင့်လက်ဆောင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။